समाज Archives - Page 68 of 147 - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
काठमाडौं, ८ फागुन । सबैभन्दा बढी घुस र कमिसन चल्ने सरकारी कार्यालय मध्ये एक हाे । वैदेशिक रोजगार विभाग । वैदेशिक राेजगारमा जाने लाखाै नेपालीकाे भविष्यसँग जाेडिएकाे विभाग यतिसम्म गलत काम गरिरहेकाे छ कि नक्कली भिसामै धमाधम श्रम स्वीकृति दिइरहेकाे छ । याे विभाग सरकारकाे नीति नियम कानुन अनुसार नभर्इ मानव तस्करी गर्ने गिराेहकाे इसारामा […]
काठमाडौं, ७ फागुन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. विनोदमान श्रेष्ठले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक पद अस्वीकार गरेका छन् । उनलाई निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले महानिर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै श्रेष्ठले महानिर्देशकको पद अस्वीकार गरेका हुन् । उनले आकर्षक विभागको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारी आश्चर्यमा परेका […]
६ फाल्गुन २०७४, आईतवार १९:५३ February 18, 2018 Nonstop Reporter
काठमाडौं, ६ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले फागुन ८ गते नेपाल बन्दको आव्हान गरेको छ । आफ्ना नेता-कार्यकर्ताहरुमाथि बिनाकारण दमन गरेको भन्दै नेकपाले त्यसको विरोधमा ८ गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेको हो । पार्टी महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लेआइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्युनिस्ट नामबाट सरकारमा पुगेका ओलीले आफ्नो पाखण्डी एवं दमनकारी चरित्रलाई नांगो बनाएको […]
१.अन्डरलाइन गरेर पढ्ने कतिपयको बानी पढ्दै अन्डरलाइन गर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा अर्काे पटक आफुलाई चासो लागेको विषय खोज्न सजिलो हुन्छ । परीक्षा दिने केही दिनअघि अन्डरलाइन गरेको विषय दोहो¥याउँदा सम्झन सजिलो हुन्छ । २. आफ्नो नोट आफैँ बनाउने धेरैले परीक्षा आउने बेला साथीभाइसँग नोट मागेर पढ्ने गर्छन् । आफैँले नोट बनाउँदा सम्झन सजिलो हुन्छ […]
६ फाल्गुन २०७४, आईतवार ०९:२८ February 18, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडौं, ६ फागुन । गोरखाको मान्बुस्थित भवानी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीलाई शिक्षकले मरणासन्न हुने गरी कुटेका छन् । विद्यालयमा अनुपस्थित भएको निहुँमा ७ कक्षा पढ्ने १४ वर्षीय सुपारे कार्की पिटिएका हुन् । पिटाइबाट उनको औँला सुन्निएको र रगत जम्ने अवस्थामा पुगेपछि अप्रेसन गरिएको छ । कार्कीलाई शिक्षक भरतमणि तिमल्सिनाले ढाडमा लठीले कुटेको र तेस्रोपटकमा […]
काठमाडाैं । वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियामा दुई महिनामा ५४ नेपाली मजदुरको मृत्यु भएको छ। सन् २०१८ को दुई महिनामा यति धेरै संख्यामा नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन्। मृत्यु हुनेमा २२-४० वर्ष उमेर समूहका युवा छन्। क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासको तथ्यांकअनुसार जनवरीमा ३३ जना र फेब्रुअरीमा २१ जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा धेरै सुतिरहेकै बेला […]
६ फाल्गुन २०७४, आईतवार ०८:५४ February 18, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडाैं, ६ फागुन । नामिबियामा बिहीबार सम्पन्न आइसिसी विश्व डिभिजन–२ क्रिकेट लिगमा एेतिहासिक जित निकाल्दै स्वदेश फर्किएकाे नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टाेलीलार्इ भव्य स्वागत गरिएकाे छ । विश्व डिभिजन २ लिगमा उपविजेता बनेकाे नेपाली टाेलीलार्इ त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएकाे हाे । शनिवार राती ९ बजे विमानस्थलबाट बाहिरिएकाे टाेलीलार्इ ठूलाे संख्यामा जम्मा भएका समर्थकले स्वागत […]
दक्षिण कोरियामा रहेका चितवनवासीले गरे अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन
५ फाल्गुन २०७४, शनिबार १४:०० February 17, 2018 Nonstop Khabar
सोल । वैदेशिक रोजगारी र अन्य कामको सिलसिलमा दक्षिण कोरिया पुगेका चितवनबासीले नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छन् । ‘चितवन सम्पर्क समिति दक्षिण कोरिया’को चौधौं अधिवेशन सम्पन्‍न भएको छ । अधिवेशनले भोला पौडेलको अध्यक्षमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलिप ढुं‌गाना उपाध्यक्ष लिलाकान्त महतो थारु, सचिव राजु घिमिरे सर्वसम्मत रुपमा नयाँ कार्यकालको लागि […]
५ फाल्गुन २०७४, शनिबार १२:३७ February 17, 2018 Buddha Sharan
काठमाडौं, ५ फागुन । काठमाडौँको लगन टोलमा आगलागी हुँदा एक जनाकाे जलेर मृत्यु भएको छ । साथै दुईवटा घरकाे अधिकांश भाग जलेर नस्ट भएकाे छ । शनिबार बिहान साढे ३.३० बजेतिर कामनपा १२ वडाकावासी अमृत रञ्जीतको घरबाट सुरु भएको आगो फैलिएर छिमेकी अष्टनारायण महर्जनको घरमा समेत क्षति पुर्याएकाे हाे । धुलिखेल नगरपालिका ६ स्थायी घर […]
५ फाल्गुन २०७४, शनिबार १०:२२ February 17, 2018 Nonstop Khabar
सप्तरी, ५ फागुन । खड्क नगरपालिका–९ लालपट्टीकी १३ वर्षीया बालिका पार्वतीकुमारी मण्डलको बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार हत्यामा बालिकाको ठूलोबुबाका छोरा १८ वर्षीय राजदेव मण्डल संलग्न छन् । शुक्रबार राजविराजमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी मुकेशकुमार सिंहले राजदेवमाथि कारबाही अगाडि बढाइएको बताए । सप्तरीमा चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा २७ वटा बलात्कारका घटना प्रहरीसमक्ष […]